ဘ၀နှင့်ပညာပေး – Media Sharing
လင်​မယားနှစ်ယောက်ကို လစာ​ ၅ သိန်းပေးပြီး နေစရာလည်း​ပေးတယ်​…ဆန်​တစ်​အိတ်​ ဆီ၁ပုံးနဲ့ ​ဘောက်​ဆူးအဖြစ်​ ပိုက်​ဆံ ၁၅သိန်း​ပေးလိုက်သောအခါ
လင်​မယားနှစ်ယောက်ကို လစာ​ ၅ သိန်းပေးပြီး နေစရာလည်း​ပေးတယ်​…ဆန်​တစ်​အိတ်​ ဆီ၁ပုံးနဲ့ ​ဘောက်​ဆူးအဖြစ်​ ပိုက်​ဆံ ၁၅သိန်း​ပေးလိုက်သောအခါ လင်​မယားစုံတွဲ တစ်​တွဲဟာ အဖိုးအို တစ်​​ယောက်​ဆီမှာ အလုပ်​လုပ်​ကြပါတယ်​ …။ အဖိုးအိုက အဲ့လင်​မယားကို တစ်​​ယောက်​ ၂ သိန်းခွဲ ဆီ လစာ​ပေးထားပြီး၂​ယောက်​​ပေါင်း ၅ သိန်း မှန်​မှန်​​ပေးပါတယ်​ …။ နေစရာလည်း​ပေးတယ်​ ဆန်​
မငိုတော့ဘူး ရင့်ကျက်ပြီ… စိတ်ထိခိုက်၊၀မ်းနည်းကြေကွဲရတိုင်း တိတ်တိတ်ကလေး ငိုတတ်တာ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး..။ စ်ိတ်ထိခိုက်တဲ့အခါ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားပြီး မျက်တောင်ကို ပုတ်ခတ်လိုက်ရင်း ပြန်အားတင်းတတ်တာလည်း ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါရဲ့..၊ ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးနာပြီး ထုံကျင်နေတဲ့အခါ ပြုံးနိုင်အောင် ဇွတ်အတင်း ကြိုးစားတတ်တာလည်း ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဘယ်လိုသူမျိုးတွေက တိတ်တိတ်ကလေး
သင့်ဆီရောက်လာမယ့် ပျော်ရွှင်မှုစစ်စစ်တွေအတွက် သင်လွှတ်ချလိုက်ရမယ့် အရာများ
သင့်ဆီရောက်လာမယ့် ပျော်ရွှင်မှုစစ်စစ်တွေအတွက် သင်လွှတ်ချလိုက်ရမယ့် အရာများ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ရက်တွေကို သဘောမကျတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုက ကျန်းမာပြီး နုပျိုမှုတွေပါ ဖြစ်စေတာမို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ပျော်ရွှင်မှု မရှိအောင် ကိုယ်တိုင် လုပ်မိနေတတ်တာလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေကတော့ လွှတ်ချလိုက်မှသာ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ပြန်လည်
ဆင်းရဲခြင်းလေးမျိုး ဘာတွေ ဆင်းရဲတာလဲ ဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတာလဲဆိုတာ ( စာဖတ်ချိန် သုံးမိနစ် )
ဆင်းရဲခြင်းလေးမျိုး ဘာတွေ ဆင်းရဲတာလဲ ဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတာလဲဆိုတာ ( စာဖတ်ချိန် သုံးမိနစ် ) ဆင်းရဲခြင်းလေးမျိုး ဘာတွေ ဆင်းရဲတာလဲ ဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတာလဲဆိုတာ ( စာဖတ်ချိန် သုံးမိနစ် ) ( ၁ ) ငွေကြေးဆင်းရဲတာ သုံးစွဲစရာငွေ အလုံအလောက် မရှိခြင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကျွေးမွေးနိုင်ခြင်း ၊ မိသားစုကို မကျွေးမွေးနိုင်ခြင်း
မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ မိန်းကလေးတွေလည်း တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ကို ထွက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပဲ ခရီးထွက်ပါစေ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေတာမို့ မပျော်ရမှာတော့ မပူပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ရင်တော့ ပိုပြီး အကျိုးရှိတာလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ (1) ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှု အများနဲ့ဆို ကိုယ့်ရဲ့ စီစဉ်ရမှု
အမျိုးသမီး များသတိထားကြပါ။ ဖြစ်သွားပြီးမှဆို မလွယ်ဘူး
အမျိုးသမီး များသတိထားကြပါ။ ဖြစ်သွားပြီးမှဆို မလွယ်ဘူး အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်ဝတ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာကဒ်ကို ပေးခဲ့တယ်။ သူမကလဲ သဘောရိုးနဲ့လို့
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ ညီမလေး…ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ ညီမလေး…ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့ ချစ်သူရည်းစား ဘဝမှာ ချစ်သူရည်းစားလိုပဲနေစမ်းပါ ညီမလေးရာ။ ယောင်လို့တောင် လင်မယားလိုတော့ မနေချင်စမ်းပါနဲ့ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်မိပါစေနဲ့။ ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ …။ ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့အကုန်ခက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ အဆီစား အသားပါမျိုပြီး အသွေးပါ သောက်တဲ့အမျိုး …။
ဦးဖိုးအေးတို့မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲမှာပေါက်တဲ့ မျှစ်ကိုချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ
ဦးဖိုးအေးတို့မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲမှာပေါက်တဲ့ မျှစ်ကိုချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ…လူတစ်ယောက်က မေးတယ် …။ “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား …။ ဖြေ – ”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ …? သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ
FB သုံးတာ ဒီလို ပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ်ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ
FB သုံးတာ ဒီလို ပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ်ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ ဖတ်ကြည့်မှ သိမှာမို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော် ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ …။ လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ် …။ အချိန်တော်တော်ကြာမှ အသက်ကယ်လှေတစ်စင်း ရောက်လာတယ် …။ အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာပဲ ကျန်တော့တယ် …။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်
ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ?ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတဲ့ နွားတွေ သိဖို့
ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ?ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတဲ့ နွားတွေ သိဖို့ မိန်းခလေးတွေ သေချာဖတ် ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ။ မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ? ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေကပါသေးတယ်